ဂျူဗင်တပ် - ဘာစီလိုနာပွဲမှာ ပွဲအဖြေကို အဓိကထားပြောင်းပေးမယ့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေမှုများ
နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံထားတဲ့ ၂၀၁၇တုန်းက ဂျူဗင်တပ် အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးမရှိသရေကျထားပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်အသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံထားပြီး အဲ့ဒီတုန်းက ဂျူဗင်တပ် အိမ်ကွင်းမှာ ကစားခဲ့စဥ်ကတော့ ဂိုးမရှိ သရေပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ညမှာ ကစားမယ့် ဂျူဗင်တပ်-ဘာစီလိုနာပွဲကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘောလုံးချစ်သူတွေ အဓိကထား စောင့်ကြည့်နေမယ့်ပွဲလို့ ယူဆနိုင်ပြီး အဓိကကတော့ ရော်နယ်ဒိုနဲ့-မက်ဆီ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကို မျှော်လင့်နေကြ တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ရော်နယ်ဒိုကတော့ ကိုဗစ် မပျောက်သေးလို့ ယနေ့ည ကစားမယ့်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်မရထားပါဘူး။
ဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကိုတော့ မြင်တွေ့ရဖို့ မရှိသေးပေမယ့် ယနေ့ညပွဲကို ပရိသတ် တွေ စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် အဓိက ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။
၁. မိုရာတာ - လန့်ဂ်လတ်
မိုရာတာကတော့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းအတွက် ၄ပွဲ၃ဂိုးထိသွင်းယူထားပေးနိုင်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဒိုင်နမိုကိဗ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အဖွင့်ပွဲမှာ ၂ဂိုးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်မှာ အက်သလက်တီကိုကနေ ဂျူဗင်တပ်ကို အငှားနဲ့ ပြန်လည် က စားနေသူ ဖြစ်ကာ ယခုတွေ့ဆုံမယ့် ဘာစီလိုနာကတော့ ယခင် အက်သလက်တီကိုအသင်းနဲ့ရော ၂၀၁၅မှာ ဂျူဗင် တပ်စ်အသင်းနဲ့ရော ရင်ဆိုင်ဖူးပြီး ဂိုးတွေသွင်းထားနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုရာတာအနေနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းဖက်ကို တတိယမြောက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ထပ်ရလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေ မယ့် အဓိက အဟန့်အတားဖြစ်တဲ့ ပီကေး မကစားနိုင်သေးလို့ အသင်းရဲ့ ခံစစ်ကို တာဝန် ယူနေရတဲ့ ကလိုင်းမန့် လန့်ဂ်လတ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုနေပါတယ်။
မိုရာတာအတွက် ကလိုင်းမန့်နဲ့ အတွေ့အကြုံရှိထားဖူးပြီး အက်သလက်မှာ ကစားစဥ် ဘာစီလိုနာအသင်းကို ရင် ဆိုင်ရာမှာ မကြာခဏ တွေ့ဆုံထားဖူးတာကြောင့် နှစ်ဦးသား တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိနေလို့ ပိုမို ပါးနပ်တဲ့သူက ရလဒ်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ရှိနေတာပါ။
၂. ချီဆာ - ဒက်စ်
အမေရိကန် ကစားသမားလေး ဆာဂျီယိုဒက်စ်ကတော့ ယနေ့ညကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိနေ ပါတယ်။ ဘယ်တောင်ပံ အားသာတဲ့ ကစားသမားလေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရီးရဲနဲ့ အယ်လ်ကလက်စီကိုဒါဘီမှာ သူ့ရဲ့ ပုံ မှန်မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ ကစားခဲ့ရတာတောင် ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သူပါ။၎င်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ ဂျူဗင်တပ်အသင်း နဲ့အတူ ပထမဆုံး ပါဝင်ကစားထားနိုင်တဲ့ ချီဆာကို ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးမယ့် သူ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ချီဆာ ကတော့ ဘောလုံးနဲ့အတူ ပြေးလွှားရာမှာ ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းဖော်တွေကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်မှု မြင့်မားသူပါ။ ဒက်စ်ကတော့ ဘယ်နောက်ခံလူ စစ်စစ်မဟုတ်ပဲ အလာဘာ မကစားနိုင်လို့ ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာ ကစားနေ ရတဲ့ ညာနောက်ခံလူ ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ အယ်ကလက်စီကိုဒါဘီပွဲမှာတော့ အမေရိကန်လူမျိုး ကစားသမားအ ဖြစ် ပထမဆုံး ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၃. ရမ်ဆေး - ပီယာနစ်
ပီယာနစ်အတွက်တော့ သြဂုတ်လက အသင်းကို စွန့်ခွာပြီးနောက် ယခုအကြိမ်ဟာ ပထမဆုံး တူရင်မြေကို ပြန် နင်းတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဘာစီလိုနာကို ရောက်တာ မကြာသေးလို့ အထိုင်ကျဖို့အတွက်တော့ ရုန်းကန်နေရဆဲ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ညမှာတော့ တွဲဖက်ဟောင်း ရမ်ဆေးနဲ့အတူ ကွင်းလယ်မှာ ပြန်လည် အားပြိုင်ရပါတော့မယ်။
ရမ်ဆေးအနေနဲ့ကတော့ တိုက်စစ်မှူး မိုရာတာနောက် နောက်ချန်တိုက်စစ်မှူး ပုံစံမျိုးနဲ့ ကစားနေပြီး ယနေ့ညမှာ လည်း ရော်နယ်ဒို ပြန်မပါနိုင်သေးတဲ့အတွက် အလားတူ နေရာမှာပဲ ကစားလာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ရမ်ဆေးကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲ ၅၀ ပြည့်သွားတဲ့ တတိယမြောက် ဝေးလ်ကစားသမားအဖြစ် ရွိုင်ယန်ဂစ် ၁၄၁နဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ် ၆၄တို့ နောက် ရပ်တည်ထားနိုင်ပြီဖြစ်လို့ ယုံကြည်မှုလည်း မြင့်မားနေပါတယ်။ ပီယာနစ်အတွက်တော့ ယခုတစ် ကြိမ် ရမ်ဆေးနဲ့ ပြန်အတွေ့က အနည်းငယ် အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၄. ဘိုနော့ဗ်ချီ - အန်ဆုဖာတီ
လေပြေနဲ့ ကျောက်ဆောင် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး လေပြေကနေ မုန်တိုင်း ဖြစ်သွားမလား လေပြေ အဖြစ်သာ ရှိနေခဲ့မလားဆိုတာကတော့ ယနေ့ညမှာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမယ့် အချက်ပါပဲ။ အသက် ၁၇နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူးလေးရဲ့ လျင်မြန်မှုက သာသွားမလား၊အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ နောက်ခံလူ ဘိုနော့ဗ်ချီက ပဲ ပါးပါးနပ်နပ် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မလားဆိုတာ အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ ဖာတီကတော့ ငယ် သူဖြစ်ပေမယ့် ခေသူမဟုတ်ပဲ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အသက် ၁၈နှစ်မပြည့်ခင် တစ်ဂိုးထက် ပိုသွင်းနိုင်သူအဖြစ် မှတ် တမ်းရေးထိုးထားပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅. ဘန်တန်ကာ - မက်ဆီ
မက်ဆီအတွက်တော့ ပြိုင်ဖက်‌ဟောင်း ရော်နယ်ဒိုနဲ့ ပြန်လည် ရင်မဆိုင်ရပေမယ့်လည်း ပြိုင်ဖက်ကောင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာတော့ အမှန်ပင်။ကွင်းလယ်မှာ ဇာဗီ၊အင်နီယေစတာတို့လို့ ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသူတွေ မရှိ တော့တဲ့နောက် မက်ဆီဟာ ဘောလုံးကို ကွင်းလယ်ထိ ဆင်းယူနေရပါတယ်။ယခုနှစ်မှာတော့ ကော်တင်ဟို အ ကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းတွေနဲ့အတူ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပေမယ့် ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ ပါဝင်နိုင်ဖို့ မသေချာပါဘူး။ဒါ ကြောင့် မက်ဆီအနေနဲ့ ကွင်းလယ်ထိသာ ဘောလုံးကို ဆင်းယူရမယ်ဆိုရင်တော့ ကွင်းလယ်မှာ ဘန်တန်ကာကို အရင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုနေပါတယ်။
ယခု ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေက အဓိက ပွဲအဖြေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိမယ့် အဓိက တွေ့ဆုံမှုတွေ ဖြစ်နေတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက ကျော်ဖြတ်နိုင်မလဲ၊ဘယ်သူက ပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်မလဲ စတာတွေကိုတော့ ယနေ့ ညမှာ ကြည့်ရပါမယ်။